New Idea (नँया सोच) - Nepali Me
nepalime dot com – नेपाली कथा, नेपाली जोक्स, नेपाली भनाइ, नेपाली सुभकामना
Bikash Gurung September 29, 20200Comments
एकादेशको कुरा हो, एउटा गाँउमा बूढा र बूढी मिलेर घरमा बस्दथे र सँधै एक अर्कालाई माया गर्दथे । उनीहरुको चार छोरी मात्र थियो । अरु गाँउलेहरु ती बूढा र बूढीको एक अर्काको माया देखेर छक्कै पर्दथे ।
दिन बित्दै थियो । उनीहरुको छोरीहरु पनि ठुली हुँदै गयो । अब भने बूढा बुढीलाई आफ्नो छोरीहरुको चिन्ता हुन थाल्यो । उनीहरु निकै गरिब थिए । चारै छोरीहरु मिहिनेती थिए । छोरीहरुको काम बाट उनीहरुको घर चलिरहेको थियो । तर छोरीहरुको बिहे गर्दिनको लागि उनीहरुसँग केही सम्पति थिएन । सम्पतिको नाममा त्यही एक घर र केही बाख्राहरु थिए ।
छोरीहरु सबैको बिहेको उमेर पनि भइसकेको र त्यो एउटा घर बेचेर चारै छोरीको बिहे पनि सम्भव थिएन । बिहेको चिन्ताले बूढाबुढीको मन पोलिरहन्थ्यो । अब त बूढालाई खाना पनि खान मन लाग्न छाड्यो । बूढाको यो अबस्था देखेर सबैलाइ चिन्ता हुन्थ्यो तर सबै परिवारले सम्झाउदा पनि बूढाको मन भरिएन ।
तर एकदिन बूढालाइ नँया सोच आयो । यस्तो सोच जून गाँउमा अहिलेसम्म कसैले गरेको थिएन । बूढाले आफ्नो चार छोरीहरुको बिहे चार जनावर सँग गर्ने विचार गर्यो ।
सुरु मा परिवारको कसैले यो कुरा मानेन तर बूढाले धेरै सम्झउँदा छोरीहरु पनि माने ।
त्यसैले बूढाले जेठी छोरीको बिहे बाघसँग, माहीली छारीको भालुसँग, साँहीलीको र्सपसँग र कान्छीको चरासँग गर्दियो ।
सबै गाउँले छक्क परेपनि छोरीहरुको जिवन निकैनै राम्रो सँग कट्न थाल्यो र बूढाबूढी पनि खुसी भए ।
केही बर्ष पछि बूढालाई आफ्नो छोरीहरुको याद आयो र भेट्न भनी घरबाट निस्कियो ।
पहिले जेठी छोरीको घरमा जाने निर्णय गरेर, बाघ ज्वाँइलाई भेट्न ओडारमा पुग्यो । बाघ पनि आफ्नो ससुरोलाइ देखेर खुसी भयो ।
त्यसपछि बाघले आफ्नो बूढीलाई भन्यो –“ल तिमी पानी तताएर ठिक पार्नु, म र ससुरा मिलेर एउटा बाख्रा लिएर आँउछु ।” बाघ र ससुरा डुल्डै एउटा गाउँमा पुगे र पर एउटा बाख्राको गोठ देखे । गोठमा पुगेर बाघले भन्यो –“ल ससुरा बा, म भित्र जान्छु र फुत्त एउटा बाख्रा फाल्छु । तपाई त्यसलाई च्याप समाएर सिस्नोको झाँङमा फाल्नुहोस ।”
बुढा तयार भएर बसे र बाघ ज्वाँइले बाख्रा फाल्दा च्याप समाएर सिस्नोमा फाले । पछि ओडार फर्केर मासु बनाएर निकै रमाइलो को साथ बुढाले खाए । त्यसरी एक महिना जति बसी सकेपछि बुढालाई बल्ल आफ्नो बुढीको याद आयो र छोरी ज्वाँइ सँग बिदा मागेर घर फर्किए ।
घरमा पुगेर बुढाले सबै करा बुढीलाइ सुनाए । त्यसपछि बुढीले भने –“तपाईलाई पो ज्वाँइले खुवाउँछ, मलाई को छ र खवाउने?”
अनि बूढाले भने–“म छँदैछुनी, तँ किन आत्तिन्छे?”
त्यसपछि बूढाले पनि आफ्नो ज्वाँइ जस्तै गरी बूढीलाई लिगेर एउटा गोठमा पुग्यो ।
त्यसपछि बूढीलाई भन्यो–“तिमी बाहिरनै बस, म भित्र गएर बाख्रालाई फुत्त फ्याल्छु अनि तिमी त्यसलाई च्याप्प समातेर सिस्नोको झाँङमा फाल है ।”
अनि बूढा गोठ भित्र मात्रै के पुगेथ्यो, एउटा ठुलो बोकोले लात्तीले हान्दियो । बूढा त सिधै बुढीको हातमापो पुग्यो । बुढीले चैँ बाख्रा आयो भनेर सिस्नोको झाँङमा फाल्दियो । बुढाले आथ्था, पोल्यो भनेसीपो बुढीले चाल पायो । बल्ल बल्ल बूढा बूढी त्यहाँ बाट निस्केर घर पुगे । बूढो त एक महिना नै बिरामी भयो ।
बिरामी बाट उठेसी फेरी बूढालाइ आफ्नो छोरीको याद आयो । अब चाँहि बूढा माहिली छोरीलाइ भेट्न जान्छु भनी हिड्यो । धेरै लामो जङगलको बाटो हिडेँसी भालु ज्वाँइ लाइ भेट्यो ।
भालुले पनि आफ्नो ससुरालाइ सम्मान गर्यो र आफ्नो बुढीलाइ भन्योे–“ल तिमी कराइ तताएर राख्नु म पहिले तेल लिएर आँउछु । ” भालु र ससुरा तेल पेल्ने ठाँउमा पुग्यो । भालुलाइ देखेर त्यहाँको सबै मान्छे भागे । अनि भालुले भएभरको तेल आफ्नो चाकमा दले । अनि घर पुगेर तताइ रहेको कराहीमा थचक्क बस्यो । भालुको शरिरमा टाँसेको सबै तेल कराहीमा जम्मा भयो ।
त्यसपछि फेरी भालुले आफ्नो बूढीलाई भन्यो–“अब म पिठो लिगेर आउँछु, तिमी सेल रोटि बनाउनु । आज ससुराबा लाई खुब रोटि खुवाउनु पर्छ है ।”
भालु र बूढा मिलेर पिठो बेच्ने दोकानमा पनि पुग्यो र टन्नै पिठो लिगेर फर्कियो । त्यो दिन बूढाले टन्नै सेल खायो । एक महिना जति आनन्दले बसेपछि बल्ल बूढीको सम्झना आउन थाल्यो । भालु र छोरीलाइ बिदा मागी घर फर्कियो ।
घरमा बूढीले सबैकुरा सोध्यो र बूढाले पनि टन्नै सेल खाएको कुरा भने । त्यसपछि बूढीले भन्न थालीे–“तपाईलाई पो ज्वाँइले खुवाउँछ, मलाई कसले खुवाउँछ र ?”
बूढाले पनि भन्यो–“त किन आत्तेको म छँदैछुनी, चिन्ता नगर न ।”
अर्को दिन बूढाले भन्यो–“ए बुढी, तिमी कराही तताएर बस, म तेल र पिठो लिगेर आँउछु ।”
अनि बूढा तेल भाको ठाँउमा पुग्यो । सबैजना गइसकेसपछि अलि अलि पाएको तेल उसले भालुले गरे जसरीनै आफ्नो ज्यानमा दल्यो । घर आई र्भखरै तातेको कराहीमा के बसेको थियो, उसको चाकनै डढ्यो । बल्ल बल्ल बूढीले कराही बाट निकाली । फेरी एक महिना बूढा बिरामी भयो ।
त्यसपछि बूढा साँहीली छोरीलाई भेट्न भनी घरबाट निस्कीयो । धेरै हिँडेपछि बल्ल आफ्नो छोरी र सर्प ज्वाँइ भेट्यो । सर्पले पनि आफ्नो ससुरोलाइ भन्यो–“तपाइको अरु ज्वाँइले त के के खाना खुवायो होला । म चाँहि तपाइलाई पुरै पाताल लोक घुमाउँछु ।” त्यसपछि बूढा सर्प ज्वाँइको ज्यानमा बस्यो । सर्पले पनि एउटा दुलो बाट छिरेर पुरै पाताल घुमाइ दियो । सँधै एसरी घुम्दा घुम्दै महिनौ बितेको चालनै पाएन । पछि उनी बूढीको सम्झना आएसी आफ्नो घर फर्किए ।
घर पुगेर आफु पुरै पाताल लोक घुमेको कुरा आफ्नो बूढीलाइ बतायो । त्यसपछि फेरी बूढीले भन्न थाली तपाइलाइ पो ज्वाँइले घुमाउनु भयो, मलाइ कसले घुमाँउछ र?
अनि बूढाले भन्यो–“म घुमाइहाल्छु नी चिन्ता नगर न । ”
भोली बिहान बूढा र बूढी एउटा दुलो को अगाडि बसेर तयार भयो । बूढी आफ्नो बूढाको ज्यानमा थचक्क बसी । त्यसपछि बूढा सकिनसकि दुलो भित्र छिर्न थाल्यो । अलिकति भित्र के पुगेथ्यो, उनीहरु त्यही अड्कीयो । बूढीले बल्ल बल्ल तानेर बाहिर निकाल्यो । तर बूढाको ज्यानको पुरै छाला गयो । फेरी पनि बूढो बिरामी भएर घरमै आराम गर्नु पर्यो ।
सन्चो भएपछि अब कान्छी छोरीलाइ भेट्न भनि बूढा घरबाट निस्कियो । एउटा ठुलो रुख चढेपछि बल्ल चरा ज्वाँइ भेट्यो । चरा ज्वाँइले चाँहि म तपाइलाई पुरा विश्व आकाशबाट घुमाउछु भन्यो । बूढा पनि खुसी भयो । एक महिना जसो उनीहरु नँया नँया ठाँउ घुमे । पछि बूढो घुमेको मिठो सम्झना बोकी घर फर्किए ।
घर पुगेसी उनले आफ्नो बूढीलाइ पनि ज्वाँइले जसरीनै घुमाउने कुरो गरे । भोली बिहान बूढा र बूढी एउटा पहाडको अग्लो ठाँउमा पुगे ।
दुइवटा नाङ्गलो दुइ हातमा बाँदेर पङ्खा जस्तो बनाए । अनि बूढीलाइ आफ्नो पिठ्युमा राखी त्यहाँ बाट हामफाल्यो । त्यसपछि त्यो गाँउमा बूढा बूढी कहिले पनि देखा परेनन् । हामफाल्न त सँगै हामफालेको थियो तर मर्ने बेलामा सँगै पनि भएनन् । फरक फरक ठाँउमा उनीहरुको शरीर भेटियो ।
The Grasshopper and the Ant (फट्याड़ग्रो र कमिला)
We Love our Nepali Language and our Literature. This website is justaone step towards the preservation of Our Nepali Literature. Let's be together joining hand by hand and embracing the feeling of brotherhood.
Copyright © 2021 Nepali Me